Sidaad ugu abuuri lahayd khadka dhabanka ee gadhka | Ragga Stylish
Gadhka: Sida Loo Helo Khad Jeegag Dhamaystiran
Si aad u muujiso gadhka xaasidka ah waa inaad ilaalisaa ku dhawaad ​​maalin kasta. Y mid ka mid ah meelaha loo baahan yahay in fiiro gaar ah loo yeesho ayaa ah dhabannada.
Ma lihin wax ka soo horjeeda garka dabiiciga ah, laakiin shaki kuma jiro inay xaddideyso garka dhabannada waxay bixisaa muuqaal nadiif ah Iyo, indhaha dad badan, isla markiiba waxay noqotaa mid soo jiidasho leh. Tallaabooyinka soo socda ayaa kugu hagi doona habka loo abuurayo loona dayactirayo qadka dhabankaaga:
Waxa ugu muhiimsan waa in la sawiro khad dhalanteed dhabanka ah. Si aad si sax ah u sameyso, waxaad u baahan doontaa inaad dhigto laba dhibcood. Bar A halka ay bararku dhinacyadu ka bilaabmaan inay ballaadhaan oo ay dhibic B ka hooseeyaan, halkaasoo gadhku ku xidho shaaribku Adoo ku biiraya A iyo B, waxaad arki doontaa taas oo ah khadka dhabanka ugu fiican ee gadhkaaga. Waad xariijin kartaa khadka inta aad u baahan tahay iyadoo kuxiran hiddo-wadahaaga ama dookhaaga shaqsiyeed (haddii aad rabto inuu ka sarreeyo ama ka hooseeyo). Had iyo jeer maskaxda ku hay in ay tahay kor u qaadista qaybta cufan iyo baabi'inta timaha dabacsan ee gadhku u muuqdo mid jilicsan oo aan caadi ahayn.
Markii aan si cad u qeexno halka xuduuda la dhigayo, waxaan u dhaqaaqi doonnaa sameynta xariiqa, ka takhalusida dhammaan timahaas haray korkeeda. Si tan loo sameeyo, waxaa jira habab kala duwan: timo jare koronto, mandiil caadi ah ama dunta. Xulashadan ugu dambeysa waxay kuu ogolaaneysaa inaad ilaaliso khadka dhabanka ee ugufiican mudo dheer adigoon ubaahanayn inaad maqaarka ku weerartid garbaha, taas oo naga saareysa dhibaatooyinka soo raaca sida cuncunka. In kasta oo ay u baahan tahay qof khibrad u leh.
La jaanqaado jadwalka dayactirka heerkaaga koritaanka. Si kastaba xaalku ha ahaadee, xusuusnow haddii aad u ogolaato timuhu inay aad u dheeraadaan, xariiqa ayaa istaagi doonta muuqaalka cad waana inaad ka bilowdaa bilawga waqtiga xiga ee aad aadeyso si aad u tilmaamto dhabannadaada. Waxaa ugu fiican in la xafido ugu yaraan hal mar usbuucii..
Wadada buuxda ee maqaalka: Ragga Stylish » Daryeelka shaqsiyeed » Gadhka: Sida Loo Helo Khad Jeegag Dhamaystiran
Sida loo jaro gadhkaaga
Imaatinka moodada ragga oo leh muraayadaha waaweyn